शिवजीलाई भुलेर पनि चढाउन नहुने ५ पवित्र वस्तु ! जानी राखौ «
शिवजीलाई भुलेर पनि चढाउन नहुने ५ पवित्र वस्तु ! जानी राखौ
Published : 14 April, 2020 10:07 pm
हिन्दु धर्म र धर्मावलम्बीहरूका अनुसार, जुन ठाउँमा रिती पुर्याएर शिवजीको पुजा गरिँदैन, नियमित शिवजीको पुजा गरिँदैन, त्यो ठाउँमा शिवलि*ङ्ग राख्नुहुँदैन। किनकी, जहाँ शिवजीको अपमान हुन्छ, त्यहाँ ठूलो क ष्ट आइपर्ने धार्मिक मान्यता छ । भोलेनाथ एकदमै शान्त स्वभावका देवता हुन् र उनलाई सजिलैसँग खुसी बनाउन सकिन्छ। तर, उनको क्रो*धलाई कसैले पनि सामना गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता छ ।
शिवजीलाई मनपर्ने कुरा
शिवजीले सबैभन्दा बढि मन पराउने वस्तुहरू भनेको गाँ’जा, भा’ङ्ग, ध’तुरो, बरफजस्तो चिसो गाईको दूध, श्रीखण्ड र खरानी हुन्। त्यसैले यी कुराहरू चढाउँदा, शिवजी अत्यन्त खुसी हुने धार्मिक मान्यता छ । साथै शिवपुराणका अनुसार, भक्तालुहरूले शिवजीको पुजा आरधना गर्दा यी ५ वस्तुहरू कहिल्यै पनि चढाउनुहुँदैन, यदि चढाएमा अनर्थ हुने बिश्वास गरिन्छ ।
१. गोलाईँती फूल (केताकी फूल):
यो फूलको नाम ठाउँअनुसार फरक पर्ने हुन्छ। मध्यपश्चिमी क्षेत्रतिर यो फूललाई ‘गोलाईँती फूल’ भन्ने गरिन्छ भने तराई क्षेत्रमा यो फूललाई केताकी फूल भन्ने गरिन्छ। एकदिन, विष्णु भगवान र ब्रह्मादेवको बीचमा को बलियो’ भन्ने विषयमा घमासान यु,द्ध भइरहेको थियो। अनि जब उनीहरूले एकदमै ख’तरनाक अ,स्त्र प्रयोग गर्न लागे, तब उनीहरूको बीचमा ज्योतिर्लि’ङ्ग बनेर शिवजी प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसपछि शिवजीले विष्णु र ब्रह्मालाई ज्योतिर्लि’ङ्गको फेद र टुप्पो पत्ता लगाउन आदेश दिनुभयो।
शिवपुराणमा उल्लेख गरिएअनुसार, दै’त्य जालन्धरको व’ध गर्न एकदमै क’ठीन थियो, किनभने उनकी पत्नीको पतिव्रत शक्तिले उनलाई कुनै पनि देवताले हराउन नसक्ने शक्ति दिएको थियो। तर विष्णु भगवान एकदमै चलाख! जाल न्धर र महादेवको यु’द्ध भैरहेको बेला विष्णु भगवानले जान्धरको रूप धारण गरी उनकी पत्नी ‘तुलसी’को पतिव्रत शक्ति लु’ट्न गए।